I-OnePlus 7 Pro iphantsi kovavanyo olunzima lwamandla kunye nokuqina | I-Androidsis
Ifowuni ye-flagship evela kwi-OnePlus yaseChina, i OnePlus 7 Pro, yasungulwa kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kunye ne OnePlus 7, kunye noJerryRigEverything's Zack sele uyibekile kuvavanyo lomzimba olubanzi ukuqinisekisa ukomelela kwesixhobo.
Nangona iselfowuni yakhiwe kakuhle, kwaye inezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni, uvavanyo esiza kulubona ngokulandelayo luyasixelela ingakanani kwaye ingakanani ifowuni enokumelana novavanyo lokuhlala ixesha elide isetyenzisiwe. Masibone!
Le yindlela i-OnePlus 7 Pro emi ngayo kuvavanyo lukaJerryRigEverything
Konke kuqala ngovavanyo lokuqala kwaye, njengoko sibona, Isikrini seflegi siqala ukukrola kwinqanaba le-6 kwisikali sobunzima be-Mohs, into eyenzeka kwinqanaba elinje ngenxa yokhuseleko olunikezwe yiGorilla yeGorilla Glass 6. Kwinqanaba lesi-7, ungaqala ukubona amanqwanqwa anzulu.
Ikhamera yangaphambili ye-pop-up ikwakhuselwe yiglasi engakhawulezi ngokululaKodwa indawo ejikelezileyo yenziwe ngeplastikhi, ekulula kuyo ukukrwela. Amacala efowuni enziwe ngesinyithi, kubandakanya itreyi yeSIM khadi, irocket volume, iqhosha lamandla, kunye nesilayida sokulumkisa.
Iphaneli yangasemva ye-OnePlus 7 Pro iza neGorilla Glass 5, ukuyikhusela kwimikrwelos. Uphawu lwe-OnePlus kunye nophawu lwegama lubekwe phantsi kweglasi ukuze zingabanjiswa ngokulula.
Ngoku kuza kuvavanyo lwe-litmus, isikrini se-smartphone esenziwe ngokuqaqambileyo. Ayibonisanga Akukho pixels zifileyo emva komzuzu wokuba nesangatye esivulekileyo esisetyenziswe ngokuthe ngqo. Xa kuthelekiswa, ezinye iipaneli ze-AMOLED zihlala kuphela malunga nemizuzwana engama-20 de kube ngumonakalo wepikseli ongafumanekiyo.
Nokuba iglasi ephezulu kwesikrini yonakele kwinqanaba le-7 Mohs ukukrwela, i-OnePlus 7 Pro's in-screen fingerprint sensor isasebenza. Ifowuni ikwenze kakuhle kakhulu kuvavanyo lwe-flex, ngaphandle kokubonisa ukwahlula okanye ukusonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-OnePlus 7 Pro iphantsi kovavanyo lukaJerryRigEverything olomeleleyo kunye novavanyo lokuqina
Itoliki kaGoogle isebenzisa ukubonwa kolwimi ngokuzenzekelayo kwimowudi yekhamera